သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုနေတဲ့ ငပလီကမ်းခြေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုနေတဲ့ ငပလီကမ်းခြေ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုနေတဲ့ ငပလီကမ်းခြေ
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on Dec 30, 2011 in Local Guides, Photography | 20 comments
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းဖို့ လိုနေတဲ့မြို့ခံတွေရဲ့ အပန်းဖြေတဲ့နေရာတွေက ခပ်စုတ်စုတ်ပါ
ကယ်ပါအုံး သူကြီးကိုခိုင်ရေ။ကြည့်မရအောင်ဆိုးနေလို့ ။မလုပ်တတ်တော့လို့ ပါ၊resolution ကြီးသွားလို့ လားဗျာ
ချုံ့ ပြီး တင်နော်
ကယ်လီဖိုးနီးယားက.. ကမ်းခြေတွေကတော့.. ကျောင်းကဆရာ/ဆရာမတွေက စုစည်းပေးတဲ့… ကျောင်းသားကလေးတွေ.. ဗော်လန်တီယာလုပ်ပြီး… အမှိုက်ရှင်းထွက်လေ့ရှိတယ်..။
ကိုယ့်ရပ်ရွာအတွက်.. အစိုးရနဲ့အာဏာပိုင်တွေလုပ်တာမစောင့်.. ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြတဲ့အလေ့အကျင့်ရစေချင်တယ်ဗျာ…။
ကျေးဇူးကြီးပါတယ် ကိုခိုင်ရေ။ကိုခိုင်ပြောတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ လူမှုသိတတ်စိတ်ကလေးလူတိုင်း(လူငယ်တွေ)မှာ
ရှိသင့်ပါတယ်။ခုဒီပို့ စ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ဓါတ်ပုံတွေက တဖက်ကကြည့်ရင် ကျနော်တို့ မြို့ ကိုကမ္ဘာကသိနေတဲ့ ငပလီ
ကိုအရောင်ဆိုးသလိုတော့ဖြစ်သွားမှာပါ။ဒါပေမယ့် ညစ်ပတ်ပေရေ နေတဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အား
ကျနော်တို့ ရဲ့ကမ်းခြေမှာရေတားတံတိုင်းတွေသဖွယ်ကာရံထားတဲ့ ကျောက်ဆောင်တွေကို ထုခွဲနေကြခြင်း၊လေကွယ်၊
ရေကာအဖြစ် သဘာဝကပေးထားတဲ့တောင်တွေက နေလမ်းခင်းကျောက်များအမြောက်အမြားထုတ်ယူနေခြင်းတို့ 
ကြောင့် ပင်လယ်၏သဲသောင်ပြင်ထူပျောလာခြင်း၊သဘာဝရေပျော်သတ္တဝါများလျော့နည်းလာခြင်းတို့ ကိုရင်ဆိုင်
ကျနော်ခုနေတင်ထားပေးတဲ့ ကျောက်ပုဇွန်ကြီးတွေ၊ရေမျောက်(Octopus အနွယ်)စတဲ့ရေနေသတ္တဝါတွေကရှားပါး
Public area တွေအဖြစ်နေလို့ ရတဲ့နေရာတွေကလဲရှားပါးလာပြီး ခုလိုနေရာမျိုးတွေမှာသာမြို့ ကလူတွေနေကြရပါတော့တယ်။
တကယ်နေရာကောင်းတွေ အားလုံးကို ဟိုတယ်ကြီးတွေဆောက်ဖို့ တရုတ်၊ကုလား၊ဂျပန် ထိုးရောင်းစားနေပါတော့တယ်။
နောက်ဆုံး ဝကွက်သိမ်းပိုက်လိုက်သူကတော့ ထူးကုမ္ပဏီကပါ။
မောင်သန်းထွဋ် ဦးရေ … ပုံတွေကို တပုံတင်လိုက် insert into post လုပ်လိုက် နောက်တပုံတင်လိုက် … အင်ဆက်လုပ်လိုက်ဆိုလျှင် ပုံကြီးတွေထွက်ပါတယ် … ။ အကုန်လုံးတင်ပြီးတော့ အင်းဆက် ဂလက်ရီဆိုလျှင် အခုလို ပုံသေးလေးတွေပဲပေါ်မှာပါ … ။
တံတားနေရာကိုတော့မသွားရဲဘူး .. မတော်လို့ တံတားကျိုးလျှင် ဘယ်နှယ့်လုပ်မလဲနော် … ။ ကျောက်ပုစွန်ကြီးကတော့ မိုက်တယ် .. အကြီးကြီးပဲ … ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမအိတုံရေ။နောက်များကြုံဆုံခဲ့ရင် လာလည်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အားလုံးသော
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုမောင်သန်းထွဋ်ဦးရေ ဒီထက်ဆိုးတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိနေပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ ဂျိတ္တောမှာ ငါးလှန်းရန် နေရာတွေပြောက်တော့မယ်
ကမ်းခြေကို အပိုင်စီးရန် ကြိုးစားနေကြပါပြီ
ခရစ်စမတ်နေ့ကလဲ ကမ်းခြေမှာဆိုင်ကယ်စီးလို့ ဖမ်းတယ်ဆိုပြီးကြားလိုက်သေးတယ်
ဖမ်းတဲ့လူက ဒုရဲအုပ် တင်ကိုလတ် လို့ပြောတယ်
ဖမ်းခိုင်းတဲ့လူက ဟိုတယ်မန်နေဂျာ ကိုကျော်စွာလို့သိရပါတယ် ဆိုင်ကယ်သုံးစီးဖမ်းခံရတယ်လို့ကြားတယ်
လုပ်ကြပါအုံး ဒေသခံတွေ ပင်လယ်ကိုမြင်ရတော့မည်မထင်တော့ပါဘူး
ဆိုင်ကယ်စီးလို့ ဖမ်းမယ်ဆိုရင်လဲဖမ်းသင့်တယ်။မူးယစ်ရမ်းကားပြီး ဟိုတယ်
တွေရှေ့မှာ ယုတ်ပြနေတာတော့ ဒေသခံတစ်ယောက်အနေနဲ့ အမြင်တော့
မကြည်ဘူး ။လွတ်လပ်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်တာမဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ့်လွတ်လပ်ခွင့်
ဟာ သူများကို မနှောင့်ယှက်စေရပါဘူး။ဒါဟာဒီမိုကရေစီပါ။
မောင်မိုးဒီ တို့ ရဲ့ AMATA RESORT ကကိုယ့်ကမ်းခြေကိုတာဝန်ယူ အမှိုက်ကောက်
သန့် ရှင်းရေးး လုပ်လာကြပေမယ့် တခြားဟိုတယ်တွေနဲ့ ရွာခံတွေဘက်ကပါဝင်မှု၊စိတ်ပါ
အဲဒီနယ်က..လွှတ်တော်အမတ်က.. ဒါမှမဟုတ်..လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ချင်သူက.. ဦးဆောင်ပြီး.. ရွာထဲရပ်ထဲကကလေးတွေခေါ်… အမှိုက်ကောက်ထွက်တာမျိုး လုပ်ပြသင့်တာပေါ့..။
ပရိုက်ဗိတ်ဘိခ်ျ လိုမျိုးဖြစ်အောင်.. တဦးဦး တဖွဲ့ဖွဲ့ကလုပ်နေတယ်ဆိုရင်.. ဒါကို.. မီဒီယာပေါ်တင်ပြီး.. ပြောသင့်တယ်..။
သူကြီးကိုခိုင်ပြောတာလေး အရမ်းကောင်းပါတယ်ဗျ။ဒါပေမယ့် အဖွဲ့ လေးတစ်ဖွဲ့ မဖွဲ့ လိုက်ပါနဲ့ ၊
သံတွဲမြို့ မှာ မဖွဲ့ ခင်ကကွဲနေပီ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကျနော်လဲနားမလည်တော့ပါဘူး။အမတ်လုပ်နေသူတွေ၊
လုပ်ဖို့ စိတ်ပါဝင်စားလာသူတွေအားလုံးက လည်းကိုယ်ကျိုးကိုဖက်တွယ်သူကပိုများနေလေတော့
မပြောဝံ့တော့ဘူးဗျာ။ကျနော်တို့ ရဲ့ကမ်းခြေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အချိန်တန်နေပါပီ။နောက်တောင်ကျနေပါပီဗျာ။
လွန်ခဲ့သော ၂၀၀၃ ခုနှစ် မှာ ငပလီကို ဟိုတယ်တည်ဆောက်မှု့နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ပါဝင် ပတ်သက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တိုင်းထွာဖို့စရောက်တဲ့ အချိန် အဲ့ဒီ့ဆောက်မဲ့ နေရာမှာ ခြေချစရာ မရှိလောက်အောင် ဂျွတ်ဂျွတ်အိတ်များ ၊ ငါးသေ ပုပ်များ ၊ အမိူက်သရိုက်များ အပြည့်နဲ့ပါ။
အခု ကိုသန်းထွဋ်ဦး ရိုက်ပြထားတဲ့ တဲအိမ်ဘေးက အမှိုက်ပုံလိုပါဘဲ။
ကမ်းခြေမှာကတော့ ရေမျောကမ်းတင် အတိုအထွာများနဲ့ ငါးခြောက်များ လှမ်းကြပါတယ်။
အဲ့ဒီ အမှိုက်ပုံများကို ရှင်းလင်း ဟိုတယ်ဆောက်။ နေ့စဉ် ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများက ကိုယ့်ရှေ့ လူထုကပစ်သွားတာတွေ၊ ရေမျော ကမ်းတင် ဖြစ်တဲံ့ အမှိုက်တွေ နေ့စဉ်ရှင်း၊ အမှိုက်တွေကို စည်ပင်ပစ်ခွင့်ပေးတဲ့ နေရာမှာ ကားနဲ့ သွားပစ်လို့ လှပတဲ့ နေရာလည်းဖြစ်လာရော လူထုအတွက်နေစရာ နေရာမရှိတော့ဘူး၊ ပေစုတ်နေတဲ့နေရာတွေက မြို့ခံ အတွက်ရယ်လို့ မုဒီတာ ပွားကြပါတော့တယ်။
ကိုယ်ရှင်းထားတဲ့ အိမ်ရှေ့လမ်း ကိုယ်မပိုင်ပေမဲ့ အမှိုက်လာဖွမဲ့လူ ဘယ်သူကလက်ခံချင်ပါ့မလည်းဆိုတာတော့ ကိုယ်ချင်းစာ မစဉ်းစားကြဘဲ …………………. :???:
အခု ကိုသန်းထွဋ်ဦး ရိုက်ပြထားတဲ့ နေရာက တကယ်တော့ ကမ်းခြေသဲသောင်ပြင်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး ။ ငပလီရွာထဲ တိုးဝင်ထားတဲ့ ဂျိုင်သေးလေးလို့ ပြောရမလား၊ အဲ့ဒီနေရာပါ ။ ကမ်းခြေ နောက်ဖေးပေါက်ပေါ့။
သို့သော် အဲ့ဒီ့က အမှိုက်များဟာ ဒီရေ တက်ချိန် ကျချိန်မှာ ရေနဲ့ မျောပါသွားတတ်ပြီး ကမ်းတွေပေါ်ပြန်တင်ပါတယ်။ တင်သမျှကို ဟိုတယ်တွေက ကိုယ့်ရှေ့ကဟာ ဒိုင်ခံရှင်းကြပါတယ် ။ ကမ်းခြေ တစ်ခုလုံးလိုက်ကောက်နိုင်တဲ့ အဆင့်တော့ မရောက်နိုင်ကြသေးဘူးပေါ့။
သူကြီးရေ .. လွှတ်တော်အမတ် ကိုယ်တိုင်က ငပလီမှာ ဟိုတယ်ပိုင်ပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ထွက်ကောက်မကောက်တော့မသိပါ။
ကိုသန်းထွဋ်ဦး ရေးထားတဲ့ ” တကယ်နေရာကောင်းတွေ အားလုံးကို ဟိုတယ်ကြီးတွေဆောက်ဖို့ တရုတ်၊ကုလား၊ဂျပန် ထိုးရောင်းစားနေပါတော့တယ်။
နောက်ဆုံး ဝကွက်သိမ်းပိုက်လိုက်သူကတော့ ထူးကုမ္ပဏီကပါ။” ကို လည်း ဖြစ်နိုင်ရင် တိတိကျကျလေးသိချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်သိသလောက် ငပလီမှာတော့ နေရာကောင်းမရှိတော့သလို သိမ်းစရာလည်း မရှိဘူးတော့ဘူး လားလို့။ အသေအချာတိတိကျကျလေးပြန်ရေးပေးပါဦး ။ ကိုသန်းထွဋ်ဦးတို့လို ဒေသခံတွေလောက်တော့ သေသေချာချာမသိပါဘူး ။
ခုနောက်ဆုံး သိမ်းသွားတာကတော့ အရင် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပိုင်မြေတွေဖြစ်တဲ့ ငပလီလမ်းဆုံကနေဝင်ရတဲ့
ခရစ်ယန်ဘန်ဂလိုတို့ ၊ဆောက်လုပ်ရေးဘန်ဂလိုတို့ မှလွဲပြီး ကျန်မြေအားလုံးကို သိမ်းသွားတာပါ။သိမ်းသွား
တဲ့ကုမ္ပဏီက ထူးကုမ္ပဏီကပါ။သူ ပြောထားသလိုပါဘဲ……ကမ်းခြေမှာအများပြည်သူတွေ အပန်းဖြေနားနေ
ကြဖို့ ရာနေရာတွေရှားပါးလာတာတော့ အသေအချာပါဘဲ။
tharbaw say: သူငယ်ချင်းရေ အဲ့ဒီနေ့က မူးပြီးရမ်းနေကြသူတွေကိုမဖတ်းရဲလို့
ဘယ်လိုဒီမိုကရေစီလဲတော့မသိတော့ပါဘူး ပြီးတော့ ကမ်းခြေမှာဆိုင်ကယ်မစီးရဆိုတဲ့အမိန့်ကို
ဘယ်သူထုတ်တာလဲ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာ ဒီလိုဥပဒေကိုထုပ်ချင်ထိုင်းထုပ်လို့ရလို့လား
တကယ်တော့ဒီလိုနေံကြီးရက်ကြီးတွေမှာ တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ စစ်ဆေးဖမ်းဆီးအရေးယူမှုမျိုးတွေ
ဒို့ ကမ်းခြေအလှမပျက်အောင် သရုပ်ပျက်တွေကိုတော့ ဖမ်းဆီးအရေးယူသင့်ပါတယ်
ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ ပျော်ရွင်အေးချမ်းစွာ အပန်းလာဖြေကြတဲ့မိသားစုလေးတွေ
ဘ၀အမောတွေပြေစေဖို့ ပင်လယ်ကြီးနဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့လေနုအေးလေတွေက စောင့်ကြိုနေတဲ့နေရာလေးမှာ
မြင်းစီးမယ်၊ စက်ဘီးစီးမယ်၊ ဆိုင်ကယ်စီးမယ်၊ လှေစီးမယ် ဒီလိုအခွင့်အရေးလေးတွေတော့ရသင့်ပါတယ်
ဟုတ်ပီကွ…..ကျွန်တော်တို့ မြေပေါ်မှာ လာနေရာယူနေတဲ့ လူချမ်းသာကြီးဆိုသူတွေကို
နိုင်ငံတော်သီချင်းနဲ့ အပြိုင်ဆိုပြီး ပြန်တောင်းဆိုရမယ်။မအေ -ိုးတွေ လူပါးဝလို့…@…@
“””အခု ကိုသန်းထွဋ်ဦး ရိုက်ပြထားတဲ့ နေရာက တကယ်တော့ ကမ်းခြေသဲသောင်ပြင်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး ။ ငပလီရွာထဲ တိုးဝင်ထားတဲ့ ဂျိုင်သေးလေးလို့ ပြောရမလား၊ အဲ့ဒီနေရာပါ ။ ကမ်းခြေ နောက်ဖေးပေါက်ပေါ့။
သို့သော် အဲ့ဒီ့က အမှိုက်များဟာ ဒီရေ တက်ချိန် ကျချိန်မှာ ရေနဲ့ မျောပါသွားတတ်ပြီး ကမ်းတွေပေါ်ပြန်တင်ပါတယ်။ တင်သမျှကို ဟိုတယ်တွေက ကိုယ့်ရှေ့ကဟာ ဒိုင်ခံရှင်းကြပါတယ် ။ ကမ်းခြေ တစ်ခုလုံးလိုက်ကောက်နိုင်တဲ့ အဆင့်တော့ မရောက်နိုင်ကြသေးဘူးပေါ့။”””””
htoosan ပြောတာနည်းနည်းလေးလွဲနေပါတယ်။ကိုယ်သိတာလေးတော့ဝင်ပြောရပါမယ်။ဒီအမှိူက်တွေနဲ့ ချောင်းကလေးက ငပလီကမ်းစပ်ရဲ့ မျက်နှာစာ မှာရှိနေတယ်လေ။ဒီရေအတက်အကျနဲ့ မို့ မျောပါလိုက်၊တင်ကျန်လိုက်ကတော့ရှိနေပါတယ်။လူတွေက လဲဗဟုသုတ အချက်အလက်တွေကို သေချာရေရာအောင် သိမထားလေတော့ ဆက်ပစ်မြဲ ပစ်နေကြတော့တာပါဘဲ။အမှိူက်ကောက်မဲ့ အဖွဲ့ လေးတစ်ဖွဲ့ ပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင် ပါဝင်ကူညီ
maetu ရေ ၊ အဲ့ဒီနေရာက ဇီးဖြူကုန်းရွာဘေးကထွက်လာတဲ့ ချောင်း လက်တက်လေး နဲဆက်နေတဲ့ ငပလီရွာ ကြားက မဟုတ်လား .ဦးခွန်ထွန်းဦး ဧည့်ရိပ်သာ ရှေ့ ကနဲ့ ဆက်နေတဲ့ နေရာလေ။ ရေသေကို လည်း ကြည့်ပါ ဦး ၊ မျက်နှာစာ ကမ်းကရေ က ဒီလိုမှ မငြိမ်တာ ။ဘိုတဲဟောင်းနဲ့ ငပလီရွာကြားက မဟုတ်လား ။
ကို htoosan ပြောတာမှန်ပါတယ်။ဒီနေရာလေးတွေမှာ အကိုတော်တော် နှံ့ စပ်အောင်ရောက်ဖူးနေပီဘဲဗျ၊
ကျနော်တို့ ဒေသကိုခုလောက်ရင်းနှီးနေတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
ဟုတ်တယ်ဗျာ ကိုယ့်ရပ်ရွာကို မိမိအသိစိတ်နဲ့ မှ မဆောင်ရွက်ကြတော့ဘူးဆိုရင်တော့ နောက်ကျသွားပီပြောရပါမယ်။
အဲဒီတော့ ဒီလောက်လှတဲ့ ကမ်းခြေတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ တွေ ဝိုင်းရံကြပါစို့ :::::::